“Waan ka xanaaqay bedelkii la igu sameeyey, balse magacayga yaan loo isticmaalin burburinta Man United” – Bruno Fernandes – Gool FM
“Waan ka xanaaqay bedelkii la igu sameeyey, balse magacayga yaan loo isticmaalin burburinta Man United” – Bruno Fernandes
Haaruun October 15, 2020
(Manchester) 15 Okt 2020. Bruno Fernandes ayaa jawaab waafi ah ka bixiyey wararkii dhowaan soo baxay ee sheegayay in isaga iyo macallin Ole Gunnar Soslkjaer isku faraxsanayn, isla markaana uu dhaleeceyn u geystay xiddigaha ay isku kooxda yihiin kaddib guuldarradii 6-1 ee kooxdiisa Man United ay kala kulantay Tottenham.
Bruno waa uu beeniyey gabi ahaanba hadalkaas, isagoo xusay inaan magaciisa loo isticmaalin burburinta kooxda Manchester United.
Waxaa la fahamsanaa in xiddiga xulka qaranka Portugal ee Bruno uu aad u careysnaa in la bedelo, iyadoo Man Utd lagu hoggaaminayey 4-1 qeybtii nasashada ee ciyaarta.
Markii Bruno Fernandes uu bedelay macallin Solskjaer, waxaa kooxdiisa Manchester United laga sii dhaliyey qeybtii labaad labo gool oo kale.
Dhowaan waxaa soo baxay in Fernandes uusan ku faraxsanayn qaabta uu kooxda u maamulayo macallin Solskjaer, laakiin laacibkan khadka dhexe ayaa warkaas si adag u beeniyey haatan.
Fernandes oo wareysi siinayay Sport TV ayaa hadalkiisa ku bilaabay: “Kaliya waxa aan u mahad-celinayaa macallinka maxaa yeelay waa isaga shaqsigii I doonayey, waana isaga qofkii I aaminsanaa, taatikada uu isticmaalay waa mid aad iigu fiican aniga.
“Waxaan aaminsanahay in warkaan uu yahay mid la doonayo in lagu kala geeyo kooxda, wixii la yiri oo dhan waxba kama jiraan.
“Waa run in tababaraha uu i soo badalay kulankii Tottenham, laakiin waxa uu ii sheegay in sababtu ay ahayd in ciyaarta lagu kala baxay, islamarkaana ay ina sugayaan kulamo kale.
“Dabcan kuma faraxsanayn badalka la igu sameeyay, balse waan aqbalay, qolka labiska kama dhex hadlin mana oran wax dhaawici kara kooxda.
“Kulanka kaddib tababaraha wuxuu ii soo diray farriin uu iigu rajeynayo nasiib wacan kulamadeyda xulka Portugal.
“Markii aan joognay qolka labiska dhammaadkii ciyaarta wuxuu i weydiistay aniga iyo dhowr xiddig oo kale haddii aan la hadli karno kooxda inteeda kale oo aan dhihi karno hadallo baraarujin ah, laakiin ma jirin cid dooneysay inay hadasho sababtoo ah ma ahayn waqti fiican.
“Haddii ay jirto cid doonaysa inay burburiso Manchester United yeysan isticmaalin magaceyga ama kuwa asxaabteyda ama tababaraha.
“Xaaladda kooxda waa mid wanaagsan, dabcan waan ka murugoonaynaa guuldarrada, laakiin waa inaan jawaab ka bixino kulanka soo aaddan.”
Kooxda Real Madrid oo heshiis kordhin hal sano ah hordhigaysa Luka Modric
Kooxda Juventus oo doonaysa inay sanadka 2021 la wareegto bartilmaameedkii Arsenal ee…